Umgangatho oPhezulu we-Bimetal Hole Opener kunye ne-Round Shank kunye ne-Customized Color Distributor kunye neNkonzo | Jiali
I-Bimetal Hole Opener ene-Round Shank kunye noMbala owenziwe ngokwezifiso
I-Bimetal multi-function ivuliwe
Ukusetyenziswa: iipleyiti zentsimbi, iicastings, imathiriyeli yealuminiyam, imibhobho, iiplastiki, iinkuni, iibhodi zegypsum, njl.njl. kwimisebenzi yokuvula umngxuma
Intonga yokwandisa i-shank engunxantathu ine-clamping eqinileyo nethembekileyo, ukusebenza ngokukhuselekileyo, iimfuno zombane zokuqhuba i-chuck ye-10MM okanye ngaphezulu zingasetyenziswa.
Isixhobo se-M42 senziwe nge-welding ye-elektroniki kwitekhnoloji ye-welding, kwaye emva koko ingena kwi-vacuum yokushisa okuphezulu kobushushu. Izinto eziluncedo:
Amazinyo abukhali, ukungcangcazela kuncinci, kwaye umngxuma unokulungelelaniswa ngokukhawuleza xa uvula umngxuma, okwenza umsebenzi uzinzile.
Ubunzulu bomngxuma yi-0-25mm, akukho mfuneko yokutyibilika phezulu nasezantsi, kwaye inokugqityezelwa ngexesha elinye.
Ihlala ixesha elide, i-shatter-proof, umgca wokusika awuyi kuwela, ukuvulwa kweplate encinci ngamaxesha amaninzi kunokuvulwa okuqhelekileyo, kwaye ixesha lokuvula lifutshane.
Xa uvula imingxuma, yongeza into yokupholisa ukuze uthintele ukwenza bufutshane ubomi benkonzo.
Inkcazo ye-5x57MM ene-12-28 ye-bimetal hole yokuvula
Ukucaciswa kwe-6x57MM kunye ne-30-90 yokuvula umngxuma we-bimetal
Ukucaciswa kwe-6x68MM ene-bimetal hole yokuvula ngaphezulu kwe-95
Inokufakwa kwiidrill zezandla eziqhelekileyo, iidrili ezitshajwayo, iibhentshi zokuqhuba, ii-percussion drills, ii-flat drills, kunye nabanye oomatshini. Umtshini we-drill chuck ungasetyenziswa kunye ne-clamping uluhlu lwe-10 mm nangaphezulu.
Isetyenziswe ngokubanzi kwi-industry steel cast, castings, i-aluminiyam yeemoto, imibhobho yobunjineli, ukuvuleka kwepleyiti yentsimbi, iinkuni zefenitshala, imibhobho ye-galvanized, imibhobho yokulwa nomlilo, iiplastiki, iintlobo ezahlukeneyo zomthi, iibhodi zegypsum kunye neminye imisebenzi yokuvula.
Le mveliso inokuqina okuqinileyo, i-trajectory encinci, kunye nokusika okulula. Xa usika isinyithi okanye i-stainless steel sheet, isantya sokutya sikhawuleza kakhulu kwaye imiphetho icocekile. Izinto zayo yi-M42 ethe yaphathwa ngobushushu.
I-bimetal saw band yenziwe nge-electron beam welding, kwaye emva koko i-vacuum-fired. Ifanelekile ukugrunjwa kwensimbi engenasici, i-alloy low-carbon steel, iplastiki, umthi, umbhobho we-galvanized, umbhobho we-aluminium-plastiki kunye nezinye izinto.
Isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwemizi-mveliso ngokubanzi, izixhobo zombane, ishishini leemoto, ukwakhiwa kweenqanawa, ukwenziwa kweenqwelomoya, kunye neshishini lombhobho okhokelayo.
iingcebiso: Intsimbi yokuvula umngxuma, khumbula ukongeza into epholisayo.
1. Izinto zokusika kufuneka zilungiswe kwaye zingashukumi. Kufuneka ibe kwi-engile echanekileyo ye-90 degrees ukuya emngxunyeni. Xa indawo yokubeka i-drill igqojozwa, nceda ulinde ixeshana, kwaye ngokukhawuleza uqhube umngxuma. Ngethuba lokusebenza, ukuba kukho ukungaqhelekanga okanye ukusika akulungile, nceda uyeke ukusebenza kwaye usebenze emva kokusika ukuya ezantsi.
2. Nceda ungasebenzisi amandla amaninzi xa unyusa kwaye uhla izikrufu, ukuze ugweme ukujiya izikrufu. Ukuba kukho ivenkile, akukho xanduva luya kuhlawulwa. Ukulungiswa kobunzima obungaphezulu kwe-10MM, nceda ususe intwasahlobo, enokusetyenziswa kwi-bench drills, i-magnetic drills, i-pistol drills, i-air gun drills kunye nabanye oomatshini bokomba.
3. Xa usebenzisa i-hole opener, nceda wenze ulawulo olufanelekileyo, ukhetho, uthelekiso, i-tachometer kwaye udibanise rhoqo i-coolant ngezikhathi ezithile ukukhusela i-cut cut from cracking. Ukuba isetyenziswe nge-drill ye-high-speed gun, ukutshintshwa kufuneka kulawulwe ngexesha lokusebenza. Inokuvulwa kwaye ivalwe kangangoko kunokwenzeka ukunciphisa isantya sayo sokujikeleza, esisetyenziswa ngokubanzi kwimingxuma yokubhoboza kwiidrill ezahlukeneyo zombane ze-bench drill presses.
4. Kwipleyiti yentsimbi enomngxuma we-5mm okanye ngaphezulu, vula kuqala malunga ne-1mm ubunzulu, uze usebenzise i-drill yokubeka indawo yokubhoboza umngxuma ecaleni kwesarha yesarha, elungele ngakumbi iifayili zentsimbi.
Ngaphambili: Umngxuma ophakathi kuluhlu olwandisiweyo lokuvula umngxuma wengxubevange
Okulandelayo: Isivula-mngxuma esihle sokusebenza ngamaplanga